Trojan Killer | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Trojan Killer. Show all posts
GridinSoft Trojan Killer v2.2.7.1 (x86x64) + Crack
Trojan Killer Final update လေး ထွက်လာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါ။ Virus တွေထဲမှာ Trojan ဆိုတာ တကယ် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ Virus တစ်မျိုးပါ။ မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Account တွေ Information တွေ အားလုံးကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်း ပေးနိုင်တဲ့ Virus အမျိုးအစား တစ်ခုပါ။
ကွန်ပြူတာမှာ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ Antivirus Software တမျိုး တင်ထားတယ် ဆိုရင် တောင်မှ တကယ်တမ်း မလုံခြုံ လှပါဘူး။ Spyware, Remote Access Trojans, နဲ့ အခြား Internet ကနေ ဝင်ရောက် တတ်တဲ့ Malware တွေဟာ အလွန်ပဲ မာယာ များတတ် ပါတယ်။ အဲဒီ ကောင်တွေကို ရှင်းလင်းပစ်ဖို့ အခု လိုမျိုး Software တွေ လိုအပ် ပါတယ်။ Online ပေါ်အချိန် တော်တော် များများ လျှောက်သွား တတ်တဲ့ သူတွေ အနေ နဲ့ Trojan Killer ကို မိမိတို့ စက်မှာ အချိန်ပြည့် Install လုပ်ပြီး အသုံး မပြုချင်လျှင် တောင်မှ မကြာခဏ တင်ပြီး Scan လုပ်ပေး သင့်ပါတယ်။
Trojan ထဲမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ Account တွေကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ Hacker တွေဆီက Trojan ဆိုရင်တော့ ကြောက် စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သွား ပြီပေါ့ဗျာ။ Trojan Killer က Trojan အပြင် အခြား Virus တွေဖြစ် တဲ့ Adware, Spyware, Malware တော်တော် များများ ကို Remove လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း အသုံးပြု နိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Crack File ထည့်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာဆက် လက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
Trojan Killer v2.2.7.1 latest version is an intense hostile to malware that can recognize and evacuate malware, infections, bots, rootkits, Trojans, spy applications, and even keyloggers and keeps programmers and spies away from getting to your own data and reports. Simple to utilize, Trojan Killer 2.7 sweeps your PC at each boot and identifies suspicious applications, which you can then rapidly evacuate or isolate. While surfing Internet, being assaulted by pernicious dangers is exceptionally potential. As its name suggests, Trojan Killer 2.6 isafree program that serves to battle against all the infections including Trojans, spyware, adware, and so forth.
Trojan Killer 2.2.7.1 New Features:
An additional advantage of the program is fixing any changes made by malicious software on your system and in its registry. It basically has three different scan mods which allow the user to detect infections of the system and in all directories of the hard disk, and also allows you to scan removable drives and USB media. In addition, Trojan Killer 2.2 updates its database regularly and removes all entries and the files created asaresult ofavirus attack or other emergency.
An extra playing point of the system is settling any progressions made by pernicious programmis on your framework and in its registry. It fundamentally has three distinctive scan modes which permit the client to identify dangerous actions that might harm your computer. Furthermore, it permits to sweep removable drives and USB media from viruses. What's more, Trojan Killer 2.6 upgrades its database routinely and evacuates all passages and the documents made asaconsequence of an infection assault or other crisis.
Trojan Killer 2.7 hasabasic and instinctive interface. Your PC will be totally ensured against all dangers, that it originates from the Web or removable devices or other portable media. Trojan Killer 2.2.7 Keygen Serial Number.
Trojan Killer 2.2.7.1 System Requirements:
Trojan Killer 2.2.7.1 free download is compatible with Windows7(32-64 bit), Windows 8/8.1 (32-64 bit), Windows Vista (32-64 bit), Windows XP (32 bit). It requires: Processor: 1GHz, Memory: at least 256 MB, Hard-Drive free space: At least 200 MB.
Trojan Killer 2.2.7.1 Installation Instructions:
1: Install the program - Double click on "iphone-data-recovery_full1656.exe".
3: Go to crack folder and Copy/paste "iSkySoft Crack.exe" to installation directory.
4: Run "iSkySoft Crack.exe" as admin and click on Patch button.
5: Enjoy GridinSoft Trojan Killer 2.2.7.1 Full Version.
▼ trojan-killer-setup.exe ▼ OR ▼ trojan-killer-Crack ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 27, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Trojan Killer
GridinSoft Trojan Killer 2.2.6.2 (x64)
GridinSoft Trojan Killer 2.2.6.2 (x64) | 73.60 MB
GridinSoft Trojan Killer 2.2.6.0 | 62.73 MB
ကဏ္ဍ Antivirus, Security, Trojan Killer
GridinSoft Trojan Killer 2.2.5.9
GridinSoft Trojan Killer 2.2.5.9 | 62.33 MB
GridinSoft Trojan Killer 2.2.5.6 | 61.39 MB
ကဏ္ဍ Antivirus, Trojan Killer
GridinSoft Trojan Killer 2.2.4.5 Latest Version Download
Trojan Killer works in the field of system security to ensure safety for computer systems.
We propose products to help you get rid of annoying adware, malware and other rough tools.
GridinSoft Trojan Killer 2.2.4.0 Latest Full Version Crack Patch /Keygen Free Download
GridinSoft Trojan Killer 2.2.4.0 | 45.32 MB
Downlaod links: GridinSoft Trojan Killer 2.2.4.0 ( 45.32 MB )
GridinSoft Trojan Killer v2.2.3.2 + Patch
GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံးထွက် Version လေး ရထားလို့ လိုအပ် သူများ ဒေါင်း ယူနိုင်အောင် တင်ပေး လိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Virus တွေ ထဲမှာ Trojan ဆိုတာ တကယ် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ Virus တစ်မျိုးပါ။ မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Account
တွေ Information တွေ အားလုံးကို စုံစမ်းထောက် လှမ်းပေးနိုင်တဲ့ Virus အမျိုးအစား တစ်ခုပါ။
ဒါကြောင့် Trojan တွေကို နိုင်နိုင် နင်းနင်း သတ်နိုင်တဲ့ GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံး ထွက် Version ကို တင်ပေး လိုက် တာပါ။ Trojan Killer က Trojan အပြင် အခြား Virus တွေဖြစ် တဲ့ Adware , Spyware , Malware တော်တော် များများ ကို Remove လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း အသုံးပြု နိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Patch File ထည့်ပေး ထားပါ တယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 တွေမှာ အားလုံး သုံးနိုင် ပါတယ်။
အသေးစိတ် ကို အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့ လာနိုင် ပါတယ်။
Trojan Killer works in the field of system security to ensure safety for computer systems. We propose products to help you get rid of annoying adware, malware and other rough tools.
The file can be used to speed up access to websites you visit often – by equating the website name (e.g. microsoft.com) with its DNS address, the web browser can find the website more quickly as it does not have to queryaDNS Name Server.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 21, 2014 No comments:
GridinSoft Trojan Killer V 2.2.2.9 + patch-XenoCoder | 47.3 MB
GridinSoft Trojan Killer V 2.2.2.9 နောက်ဆုံး ထွက် Version လေး ရထားလို့ လိုအပ် သူများ ဒေါင်းယူနိုင်
ဒီကောင်းလေး ကိုတော့ Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1 တွေမှာ အားလုံး
သုံးနိုင်ပြီး Virus တွေထဲမှာ Trojan ဆိုတာ တကယ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ Virus တစ်မျိုးပါ။
မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Account တွေ Information တွေ အားလုံးကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်း ပေးနိုင်တဲ့ Virus အ
မျိုးအစား တစ်ခုပါ။ Trojan ဆိုတာလည်း Virus ထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပြသနာကောင်တမျိုးပါဘဲဗျာ။
Trojan ထဲမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ Account တွေကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ Hacker တွေဆီက Trojan ဆိုရင်တော့
ကြောက် စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။
ဒါကြောင့် Trojan တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းသတ်နိုင်တဲ့ GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ Trojan Killer က Trojan အပြင် အခြား Virus တွေဖြစ် တဲ့ Adware , Spyware , Malware တော်တော်များများ ကို Remove လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြု နိုင်အောင် Full Version
အဖြစ် Patch File ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက် လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
1. Install program and don´t start it
2. Put XenoCoder patch to program install dir
3 Run patch with admin rights then apply
4. Open program and register it using any serial number and any email
Internet for Myanmar by Win Hlaing
GridinSoft Trojan Killer 2.2.2.7 Final + Patch
Trojan Killer ကိုသုံးဆွဲကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Final update လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါ။
Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms နှင့်အခြားသော malware တွေကို
စိတ်ချစွာရှင်းလင်းပေးနိုင်သည့် computer systems security ဆော့စ်ဝဲလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Full ဖြစ်စေဖို့
အတွက် Patch ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အင်စတောလုပ်နည်းကိုအရင်ဖတ်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 10, 2014 No comments:
GridinSoft Trojan Killer v2.2.2.3 + Patch
GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံးထွက် Version လေး ရထားလို့ လိုအပ်သူများ ဒေါင်းယူနိုင်အောင်
တင်ပေး လိုက် ပါတယ်ဗျာ။ Virus တွေ ထဲမှာ Trojan ဆိုတာ တကယ် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ Virus
မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Account တွေ Information တွေ အားလုံးကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်းပေးနိုင်တဲ့ Virus
အမျိုးအစား တစ်ခုပါ။ Trojan ဆိုတာလည်း Virus ထဲမှာ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ပြသနာကောင် တမျိုး
ပါဘဲဗျာ။ Trojan ထဲမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ Account တွေကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ Hacker တွေဆီက Trojan
ဆိုရင်တော့ ကြောက် စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် Trojan တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း
သတ်နိုင်တဲ့ GridinSoft Trojan Killer နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။
Trojan Killer က Trojan အပြင် အခြား Virus တွေဖြစ် တဲ့ Adware , Spyware , Malware တော်တော်
များများ ကို Remove လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အသုံးပြု နိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Patch
File ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာဆက် လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 04, 2014 No comments:
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.3 Final
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.3 Final | 40.19 MB
Download GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.3 Final ( 40.19 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, February 03, 2014 No comments:
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.0 Full
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.0 | 60.15 MB
Download GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.0 ( 60.15 MB )
GridinSoft Trojan Killer 2.1.9.2 Full Version
GridinSoft Trojan Killer 2.1.9.2 | 52.89 MB
GridinSoft Trojan Killer 2.1.5.7 With Patch
Antivirus ပရိုဂရမ်တွေက အမျိုးအမည် စုံးလင်လှသလို အသုံးပြုတွေကလည်း သူ့အကြိုက် ကိုယ့်
အကြိုက် မတူပဲ ကွဲပြားကြပါတယ် ..
အဲဒီလို Antivirus တွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်က Gridinsoft Trojan Killer ကိုမှ တစွဲတလမ်း အ
သုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Update ဖိုင်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Patch ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, April 02, 2013
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, August 22, 2012 No comments: